Mika 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Yuda ahene+ Yotam+ ne Ahas+ ne Hesekia+ bere so no, Yehowa maa Mika+ a ofi Moreset huu nsɛm a ɛfa Samaria+ ne Yerusalem+ ho yi sɛ: 2 “Aman nyinaa muntie; asase ne nea ɛwom nyinaa+ nyɛ aso, na momma Awurade Tumfoɔ Yehowa nni adanse+ ntia mo wɔ Yehowa asɔrefie+ kronkron mu hɔ. 3 Hwɛ, Yehowa fi ne tenabea reba,+ na obetiatia asase so nkoko nyinaa so.+ 4 Na mmepɔw bɛnan wɔ ne nan ase+ na asasetaw mu apaapae sɛnea ogya nan ɛwokyɛm,+ te sɛ nsu a wɔahwie agu baabi a ɛhɔ sian. 5 “Yakob atuatew ne Israel fie bɔne nti na eyi nyinaa aba.+ Dɛn ne Yakob atuatew? Ɛnyɛ Samaria anaa?+ Na dɛn ne Yuda nkoko?+ Ɛnyɛ Yerusalem anaa? 6 Na mɛma Samaria adan abo akuwakuw+ ne baabi a wodua bobe; na mede n’abo begu bon mu na mama ne fapem ho ada hɔ.+ 7 Na n’ahoni nyinaa bebubu+ na wɔbɛhyew akyɛde a wɔde maa no sɛ apaade no nyinaa wɔ ogya mu;+ na mɛsɛe n’abosom nyinaa. Ɔde n’aguaman sika na aboa ano, na ɛbɛdan aguaman foforo akatua.”+ 8 Enti mesu atwa adwo;+ mɛnantew anammɔnpan mu na mada adagyaw.+ Mesu te sɛ sakraman na matwa adwo te sɛ sohori. 9 N’apirakuru nni sabea,+ efisɛ abedu Yuda tɔnn;+ ne yare abedu me man kurow pon ano pɛɛ, Yerusalem tɔnn.+ 10 “Mommmɔ so wɔ Gat, na munnsu nso.+ “Mummunumunum mfutuma mu+ wɔ Afra fie. 11 Wo a wote Safir, fa adagyaw ne aniwu bɛsen.+ Nea ɔte Saanan de, omfii adi. Bet-Esel agyaadwo begye ne gyinabea afi mo nsam. 12 Nea ɔte Marot no hwɛɛ biribi papa anim,+ nanso bɔne na efi Yehowa hɔ aba Yerusalem pon ano.+ 13 Wo a wote Lakis,+ fa teaseɛnam sã apɔnkɔ a wɔn ho yɛ hare no. Ɔne Sion babea+ bɔne mfiase, na Israel atuatew nyinaa fi wo mu.+ 14 Enti wobɛma Moreset-Gat akyɛde.+ Na Aksib+ afie ama Israel ahene nsa asi fam. 15 Wo a wote Maresa,+ mɛma obi abɛfa w’agyapade.+ Israel anuonyam bedu Adulam+ tɔnn. 16 Wo mma a w’ani gye wɔn ho nti bɔ tikwaw,+ werɛw wo ti ho nyinaa. Ma wo ti ho nyɛ kwabokwabo sɛ opete* de, efisɛ wɔafi wo nkyɛn kɔ nkoasom mu.”+
^ Hebri asɛmfua no tumi kyerɛ ɔkɔre nso.